बहुमूल्य पत्थर फेला पारेपछि तान्जानियाका एक व्यक्ति रातारात ४१ करोडका मालिक ! जसका छन् ४ श्रीमती र ३० छोराछोरी ! « गोर्खाली खबर डटकम
२०७७ माघ ४ गते आइतवार प्रकाशित
बीबीसी – अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो तान्जानाइट नामक बहुमूल्य रत्न फेला पारेका तान्जानियाका एक सामान्य नागरिक रातारात करोडपति बनेका छन्। कुल १५ किलो तौल भएका दुईवटा पत्थर फेला पारेका सानिनिउ लाइजरले खानी मन्त्रालयबाट ४१ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त गरेका हुन्। “भोलि ठूलो भोज हुन्छ,” लाइजरले बीबीसीलाई भने। तान्जानाइट पत्थर उत्तरी तान्जानियामा मात्रै पाइन्छ र यो गहना बनाउन प्रयोग हुन्छ।
यो पृथ्वीमा पाइने दुर्लभ रत्नहरूमध्ये एक हो। एक स्थानीय भूवैज्ञानिकले यसको आपूर्ति आगामी २० वर्षभित्र समाप्त हुने अनुमान गरेका छन्। यो पत्थरलाई हरियो, रातो, बैजनी र नीलो रङ्गको विविधताका कारण विशेष मानिन्छ। यसको मूल्य रङ्गको दुर्लभताको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। तर जति राम्रो रङ्ग र सफा छ, मूल्य त्यति नै बढी हुन्छ।
लाइजरले गत साता ९.२ र ५.८ किलोग्राम वजनका दुई पत्थर खानीमा फेला पारेका थिए तर उनले बुधवार लाग्ने बजारमा त्यो बेचेका थिए। यसअघिसम्म सबैभन्दा ठूलो तान्जानाइटको तौल ३.३ किलोग्राम थियो। राष्ट्रपति जोन मागुफुलीले फोन गरेर लाइजरलाई बधाई दिए। “यो सानो स्तरमा खानी खोज्नेहरूको फाइदा हो र यसले तान्जानिया कति धनी छ भन्ने प्रमाणित गर्छ,” राष्ट्रपतिले भने। सन् २०१५ मा मागुफुली खानीमा राज्यको हितको रक्षा गर्ने र यसबाट देशको आम्दानी बढाउने नाराका साथ विजयी भएका थिए।
न ताला तोड्यो, न त बार बांगियो… तैपनि लकअपबाट चोर भाग्यो, डेमो देखेर प्रहरी चकित
भारत बेलायतको पहिलो बायइल्याटरल त्रिपक्षीय एक्सरसाइजः कोनकन शक्ति सन् २०२१